निफ्रालाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने तयारी - टि. एल. एन पोस्ट
Home अर्थ निफ्रालाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने तयारी
निफ्रालाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने तयारी
सरकारले नेपाल पूर्वाधार विकास बैंक (निफ्रा) लाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले बुधवार आयोजना गरेको स्वदेशी खपतसँग विद्युत् व्यापार र आगामी बजेट विषयक अन्तरक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटवालले निफ्रालाई विद्युत् व्यापारका लागि अनुमति दिन लागिएको बताउनुभयो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले स्थापना गरेको विद्युत व्यापार कम्पनीले पनि अनुमति मागेकोमा दिइएको छैन ।तर सहसचिव भेटवालले दुवैलाई एकै प्रक्रियाबाट अनुमति दिइने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो “जुन प्रक्रियाबाट निफ्रालाई अनुमति दिइन्छ, त्यसैगरी अन्य कम्पनीलाई पनि अनुमति दिइन्छ । ” सहसचिव भेटवालले प्रतिस्पर्धी रुपमा विद्युत् व्यापारका लागि प्रक्रिया पुगेर आएका आवेदनलाई अनुमति दिइने बताउनुभयो ।
ऊर्जा उद्यमीले क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड कम्पनी सन् २०१८ मा नै स्थापना गरेका छन् ।  सो कम्पनीमा नेपालका निजी क्षेत्रको ४५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ भने भारतीय इनर्जी एक्सचेन्जको १५ प्रतिशत सेयर छ ।
कम्पनीले तमोर बेसिनको पाँच सय मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर समेत गरेको छ । बंगलादेशसम्म डेडिकेटेड प्रसारण लाइनको निर्माण वा अन्य कुनै संयन्त्रको प्रयोगलाई कम्पनीले जोड दिएको छ ।
विद्युत् विकास विभागले क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि तत्काल कानुनी प्रबन्ध नभएको भन्दै कम्पनीलाई अनुमति दिएको थिएन । सहसचिव भेटवालले भने प्रक्रिया अनुसार अब सबै कम्पनीले अनुमति पाउने बताउनु भएको छ ।
Previous articleदुईवटाको खरबुजाको मूल्य ३० लाख
Next articleचर्चित गीत पिच रोडका गायक समीर आचार्यद्वारा जन्मदिनको अवसरमा रु. ५० हजार सहयोग
निफ्राको शेयर अब बेच्ने कि किन्ने कि होल्ड गर्ने? कतिसम्म पुग्ला यसको सेयर मूल्य
उपासना र अनमोल को कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ ।